Accueil > Gazetin'ny nosy > Kandida ben’ny Tanàna : Kamboty velon-dray aman-dreny ny “IRD”
Kandida ben’ny Tanàna : Kamboty velon-dray aman-dreny ny “IRD”
Ao anatin’ny fampielezan-kevitra ny fifidianana izay ho mpanolotsainan’ny tanàna sy izay ho ben’ny tanàna ny sokajin-kery pôlitika mandray anjara amin’izany amin’izao fotoana. Mikaikaika anefa ireo kandida sy ny Depiote avy amin’ny vondron-kery “IRD” satria tena tsy mba misy fandraisana anjaran’ny foiben’ny “IRD” mihitsy ho amin’ny fifanohanana amin’izany fampielezan-kevitra izany.
Ny depiote “IRD” no notendrena ho “mpiahy” na “coach” ao anivon’ny distrika nahalany azy amin’izao fifidianana ben’ny tanàna izao, hoy ny fitarainan’izy ireny, nefa tsy ho zakan’ny ain’ny depiote ny hoenti-mihetsika ho amin’izany amin’izao fotonan’ny fampielezan-kevitra izao, na ny hoenti-manana ny fifindran-toerana (déplacement) ihany any amin’ny kaominina misy an’ireny kandida “IRD” ireny aza. Tokony tsy hadinoina anefa, hoy ny depiote “IRD” fa raha vao midina any amin’ireny kaominina ireny ianao dia heverin’ireo mpikambana sy ny mpanohana mbamin’ny vahoaka fa “manana vola
ihetsiketsehana” ianao, ka efa miandrandra an’izany izy ireny. Nozarina rahateo hiankin-doha amin’ny lehibe ny rafitra any anivon’ny fokontany any ka tena manahirana, hoy ny fanampim-panazavan’ireny Depiote “IRD” ireny.
Etsy ankilany, ireo kandida koa dia vaky vava satria hoe “nentanina sy nantsoina izahay tamin’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana filohampirenena indroa miantoana sy tamin’ny fifidianana depiote, ka nandray anjara mavitrika, nitaona ny mponina, hanohana sy hifidy ny kandida notohanana, saingy ankehitriny, mba anjaranay ny hofidiana aty amin’ny kaominina misy anay, nefa dia zara raha peta-drindrina (affiche misy sary) ampolony no fanampiana anay”.
Tsy manao vava izahay, hoy ireny kandida hofidiana ben’ny tanàna ireny fa mbola ho avy ny fotoana hilana anay satria mbola hisy fifidianana hatrehina hatrany eto amin’ny firenena, ary tsy tokony hadinoina fa ny fampihodinana ny raharaham-pirenena dia mifototra any aminay any amin’ny fokontany sy kaomina, ny fanohanana ny eazaka ataon’ny fitondram-panjakana dia miainga any aminay vahoaka any amin’ny fiaraha-monina rehetra any, ka raha sanatriavin’ny vava; manome lamosina ny lehibe ao anivon’ny fitondrana ao izahay, inona no hitranga ?
Ny mpikatroka sasany “IRD” na “Mapar” any amin’ny fiaraha-monina any koa moa dia maro ireo nipetrapetraka, nangatsiatsiaka, satria misy amin’ireo kandida natolotra no tsy nitolona tamin’ny fotoana nilàna izany, ary na ny kandida depiote tamin’ny fotoanandro aza dia tsy vitsy ireo najadona avy any ambony fotsiny, hoy ny ako avy any anivon’ny fiaraha-monina any.
Raha ho avy koa, sanatriavin’ny vava ny hetsi-bahoaka hanoherana izao fitondrana izao, hoy ny sasany amin’ireo kandida ho ben’ny tanàna, dia mety ho sarotra ho anay ny hijoro hiaro ny fitondrana rehefa samy tsy hifampitsinjo ihany.